Edebere ọnụahịa gọọmentị nke Xiaomi Mi Band 5 | Gam akporosis
Wepụtara ndị ọrụ ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 5
Nerea Pereira | | Ngwaọrụ ndị ọzọ
Izu ole na ole gara aga, onye Asia mepụtara mgbaaka ọrụ ọhụụ. Ee, ndị Xiaomi My Band 5 ọ bụrịị eziokwu. Ihe eji eyi nke rutere n’ahịa ka ọ bụrụ otu n’ime nhọrọ kachasị mma iji tụlee ma ọ bụrụ na ị na-achọ smartband na ezigbo ego.
N'ihi na, ọ bụrụ na e nwere ihe e ji mara ezinụlọ Mi Band nke ndị na-emepụta China, ọ bụ uru dị ịtụnanya maka ego nke ụdị eriri aka ya. Ma ugbu a, anyị nwere ike ikwenye ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 5.
Xiaomi Mi Band 5 ga-efu .39.99 XNUMX na Europe.# MiBand5 pic.twitter.com/lmoSh8OSdm
Ọ bara uru ịzụta Xiaomi Mi Band 5 maka euro 39,99?
Ugbu a, leakster ama ama ama ebipụtala na profaịlụ Twitter ya ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 5 na Europe. N'ụzọ dị otú a, mgbaaka ọrụ a na-eche ogologo oge ga-abata na Spain maka euro 39,99. Onu ogugu sitere na nke onye bu ya uzo. Na ịhụ njirimara nke smartband a, ọ bụ ọnụ ahịa ịba ụba na akaụntụ.
Ka anyị cheta na Xiaomi Mi Band 5 nwere ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ. Maka ndị na-ebido ya, ihe ngebichi ya bụ nke OLED panel 1.2-inch, mgbanwe dị ịrịba ama site na 0,95-inch nke ụdị gara aga. A ga-atụkwasịkwara a usoro ọhụrụ nke magnetik ụgwọ nke ahụ ga - enyere gị aka ịgba ụgwọ mgbaaka ahụ n’enweghị mgbasasị ya.
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ na ngwaọrụ nke ụdị a, Xiaomi smartband ọhụrụ nwere mgbochi mmiri (enwere ike ịbanye ya ruo mita 50), na mgbakwunye inwe ike inyocha ihe omume egwuregwu 11 dị iche iche, gụnyere igwu mmiri ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri, yabụ na n'agbanyeghị egwuregwu ị na-eme, mgbaaka ọrụ gị na-edekọ data niile.
The icing na achicha bụ a ime akara mode na-ese foto na gị mobile, nakwa dị ka a nanị-agaghị agwụ agwụ batrị, otu n'ime oké exponents na-eme zụta Xiaomi Mi Band 5 bụrụ ihe ịga nke ọma. More, na-ahụ na ọ ga-eri naanị 39,99 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Wepụtara ndị ọrụ ọnụahịa nke Xiaomi Mi Band 5
Nke a bụ Imaguari, ọ na-abịa na NFC maka ịkwụ ụgwọ na Mastercard. Ọ bụ atụmatụ nke kwesịrị ịbịaru na ụfọdụ usoro igwe egwu na afọ ndị na-abịanụ.
[Na] Ihe kacha mma Androidsis egwuregwu nke ọnwa maka June: Kartrider Rush +
Ebube Play 4e na-egosi na posta na-ekpughe nkọwa